Malunga nathi - Qingdao Hitech Chuangying Instrument Co., Ltd.
Qingdao Hitech Chuangying Isixhobo Ewe, imi kwisixeko esaziwayo sase-Qingdao eselunxwemeni, yinkampani yetekhnoloji ephezulu ekhethekileyo kwi-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zokubala i-electromagnetic, i-counter counter, i-counters electronic and timers, njl.
U-Hitech Chuangying ubambelela kwisicwangciso-qhinga sophuhliso se- “Pursuing Technology Advance, Innovation Oriental”. Sizama ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo kubathengi bethu.
Abathengi bethu bavela eMelika, eYurophu, mpuma mpuma Asia, Australia kunye nezinye iimarike zamanye amazwe, kwaye bagubungela amashishini afana nesekethe yesekethe, iswitshi yombane ephezulu, ilifti, umvelisi, isixhobo sokuhambisa amafutha, ukubamba, njl. Njl. Schneider, Hengstler, GE, Mitsubishi kunye namanye amashishini abaziwayo.
Iimveliso zethu ezisemgangathweni kunye nokusebenza kobuchwephesha kufikelele kwinqanaba eliphambili lehlabathi. Qingdao Hitech Chuangying Isixhobo ISO9001 eqinisekisiweyo kunye namava kushishino osisityebi, siye saba uphawu ezaziwayo-kakuhle kunye ukhetho lokuqala kwimarike counter Chinese. Qingdao Hitech Chuangying angathanda ukunceda abathengi bethu iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo engcono ukudala ikamva eliqaqambileyo kunye.
Umdibaniso woThengiso oHlanganisiweyo
I-R & D, ukuthenga, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo
Bambelela kwinkqubela phambili yesayensi kunye netekhnoloji kwaye ulandele inkqubela phambili kuphuhliso
Ejolise ebantwini, intengiso kuqala
● Inkokeli yecandelo lokuthengisa laseTshayina. Uluhlu olubanzi lweekhawuntari kunye nezibali-xesha
iimodeli ezahlukeneyo kunye nokubalulwa.
● Umenzi wezinto zokubala ngokuchaneka okuphezulu kokubala
● Itekhnoloji egqwesileyo, ubugcisa obuhle kunye nomgangatho onokuthenjwa
● Enye yeetterter ezisemgangathweni zeshishini laseTshayina
● Yiba ngumtshintshi wokuqala wokukhetha kunye nomthengisi obalaseleyo kumaTshayina
Udidi lwezixhobo ezigqityiweyo lubonelela ngeemeko ezifanelekileyo kumashishini abambisanayo ukunceda kwimveliso
Abathengi benkampani banwenwele kumaphondo angaphezu kwama-30, oomasipala kunye nemimandla ezimeleyo kwilizwe liphela, kwaye iimveliso zithunyelwa eYurophu, eMelika, kuMazantsi mpuma eAsia, kuMbindi Mpuma nakwezinye iimarike zamanye amazwe.
Inentsebenziswano yexesha elide kunye ne-Nokia, i-ABB, iSchneider kunye neHengsler.